musha » Dzazvino Nhau Zvinyorwa » Hurumende Nhau » Iyo UNWTO Executive Council Inojekesa: Tsamba nyowani kubva kuChile
Nhau Nhau • Kuputsa Nhau Dzenyika Dzepasi Pose • Kuputsa Kufamba Nhau • Chile Kupwanya Nhau • Hurumende Nhau • nhau • vanhu • Spain Kuputsa Nhau • ushanyi • Trending Now
Sezvaitarisirwa uye pachinzvimbo chenhengo makumi matatu nembiri dze Executive Council, Mutungamiriri weUNWTO Executive Council, José Luis Uriarte Campos anobva kuChile akasimbisa kuUNWTO Nhengo dzeNyika kurudziro ye Executive Council yakasangana muna Ndira gore rino kuti vasarudze zvakare. VaZurab Pololikashvili seMunyori Mukuru weWorld Tourism Organisation kwenguva ye32-2022.
Minister of Tourism vanobva kuChile igweta. Semukuru weUNWTO Executive Council iripo, akatora danho rakakosha nezuro. Akajekesa kuti Executive Council yanga ichishanda mukati meUNWTO Regulations pakusarudza Zurab Pololikasgvili muna Ndira. Magweta anogona kuverenga pakati pemitsetse.
VaCampos vakanyatsotsanangura zvaiitwa neExecutive Council zvakasangana zvikaenderera mberi zvichibva pamitemo yeUNWTO, ko hapana akambobvunza.
Mushure mezvose, haisi kukanganisa kweUNWTO Executive Council, kana UNWTO General Assembly isingagoni kusimbisa chisarudzo chakaitwa navo, kunyanya apo mamiriro ezvinhu akanga achinja, uye Executive Council yakanga isingazivi zvachose chichachinja pakati pezuva chisarudzo. yakaitwa uye General Assembly.
Inogona kufungidzirwa chikonzero chekuve nemwedzi yakati wandei pakati pechisarudzo uye kusimbiswa ndeyekunyatso bvumidza shanduko dzitariswe.
Izvozvi zvasara kumusangano weGeneral Assembly weWorld Tourism Organisation (UNWTO) musangano mumazuva mashoma muMadrid kuti usimbise kana kusasimbisa kurudziro ye Executive Council kubva muna Ndira gore rino.
Kana wakatarisa UNWTO, kana wakatarisa Secretary-General Pololikashvili, uye kana tichitarisa kuti nhengo dzeExecutive Council dzinofunga sei nhasi, inonzwa kuti tinogona kunge tiri pane imwe nyika, tichienzanisa nekwatakanga tiri munaJanuary, kana kare munaSeptember.
Nhengo makumi matatu nenhatu dzeExecutive Council dzinoti 1. Saudi Arabia – 2. Algeria – 3. Azerbaijan- 4. Bahrain – 5. Brazil- 6. Cape Verde – 7. Chile- 8. China – 9. Congo – 10. Ivory Coast – 11. Egypt – 12. Spain – 13. Russian Federation – 14. France – 15. Greece – 16. Guatemala – 17. Honduras – 18. India – 19. Islamic Republic of Iran- 20. Italy – 21. Japan – 22. Kenya- 23. Lithuania- 24 Namibia - 25. Peru - 26. Portugal - 27. Republic of Korea - 28. Romania- 29. Senegal - 30. Seychelles - 31. Thailand - 32. Tunisia - 33. Turkey - yakashanda mukutenda kwakanaka uye pasi pemitemo yakasimba yakatarwa pakuvhota muna Ndira.
Pasi pemitemo yazvino, kusimbiswa kweiyi kurudziro kunodiwa ne2/3 yakawanda yeGeneral Assembly iri kuuya.
Munyori Mukuru weUNWTO, Zurab Pololikashvili akaisa Executive Council panzvimbo, achiisa nguva pfupi yemusangano wesarudzo. Izvi zvakabuda mumusangano wakaitwa neExecutive Council munyika yekwaSecretary-General, Georgia gore rapfuura. Izvi zvakare zvakasimudza tsiye panguva iyoyo.
Gurukota reChile rakanga risiri kutungamira 112th. Executive Council pakaitwa sarudzo munaGunyana gore rapfuura muGeorgia.
Misangano yeExecutive Council kazhinji haiitirwe munyika yekwaSecretary-General.
Panguva iyoyo Hon. Najib Balala wekuKenya ndiye aitungamirira. Haisi chakavanzika kufunga kuti Balala parizvino ari kutsigira Secretary-General mukusimbisa kwake svondo rinouya.
Nekuda kwekufamba uku, mumiriri mumwe chete kubva kuBahrain ndiye akakwanisa kupinda munhangemutange asina kana mukana wekuita mushandirapamwe panguva yekuvharwa kweCoronavirus pasi rose. Haana kumbove nemukana chaiwo, uye vamwe vatanhatu vakatadza kuburitsa mapepa nekukurumidza mukati menguva yakapfupikiswa, uye panguva yepike muCCIDID-6 kuti vapinde mujaho. Izvi zvaisanganisira nhengo yebhodhi reWTN uye aimbove CEO weNepal Tourism Board Deepak Joshi.
Dai pakange paine bhonzo muboka remaSecretary-General, angadai akakumbira kuti chirongwa chesarudzo chiwedzerwe kupfuura Chivabvu. Pane kudaro, akasunda kwenguva pfupi pfupi kuti Executive Council isangane zvakare nekumuvhotera. Anofanira kunge akagutsikana kusatarisana nemakwikwi akaomarara muna Ndira - uye haana.
Kamwe chikonzero chekutanga chekufambisa sarudzo kubva muna Chivabvu kusvika Ndira chabviswa, chinoti FITUR trade show, Secretary-General akaramba chikumbiro kunyangwe tsamba yakavhurika yakagamuchirwa nevaimbova Secretary Generals, nevatungamiri vaisanganisira mazita akaita saCarlos Voegeler, Muzvinafundo Geoffrey Lipman, Louis D'Amore nevamwe. Tsamba iyi yakakurudzira Secretary-General kuti aenderere mberi musangano wesarudzo weExecutive Council kusvika pazuva rekutanga kana zviri nani kupfuura.
Secretary-General ainyatsoziva kuti kubvumira imwe nguva kwaizovhura mukana wemakwikwi. Pane kudaro, akaisa mari yake yese kumusangano weJanuary Executive Council kuti utarise nyika dzedare repamusoro, achisiya dzimwe nhengo dzeUNWTO nedambudziko recorona, yaida kushandira pamwe nebazi rakazvimirira, kunyanya WTTC padivi.
Apo Mutungamiriri weGeorgia akagamuchira chisvusvuro muMadrid pausiku sarudzo dzisati dzaitwa, mumiriri weBahrain akaramba asipo mukupikisa.
Zviripachena, danho iri rakashandisa nzira yakanaka, asi zvese izvi zvinogona kunge zviri mukati memitemo nemirau. Ehe, mirau yakadai nemitemo yakaiswa apo nyika yaisaziva nezveCoronavirus.
Sezvakatsanangurwa naHonorary. Munyori Mukuru-General Francesco Frangialli muhtsamba yakavhurwa yakaburitswa svondo rino, zviri pamutemo hazvina kukwana.
Mukugadzirisa maitiro, unogona kuva zvose zviri pamutemo uye unzenza.
Nzira yesarudzo inogona kunge iri pamutemo maererano nemirairo, asi panguva imwechete isina kunaka uye isina kuenzana. Pakupera kwezuva nzira yacho yaisazova yetsika.
Sophocles akanyora kuti: “pane imwe nhambo iyo kunyange ruramisiro inova isina kururama".
Tsamba yechipiri yakavhurika yakapihwa neaimbova munyori - generals maererano nezvakawanikwa nekomisheni yezvetsika, uye zviwanikwa zvacho zvinofanirwa kunge zviri chikonzero chekuti chero nhengo ine pfungwa dzakanaka iti "mira zvishoma"
Zvakawanda chokwadi iyo Executive Council yaisaziva pakuvhotera Zurab Pololikashvili
Ichokwadi kuti iyo Ethics officer's anotyisa uye anotsoropodza mazwi mumushumo wake kuGeneral Assembly, uye kuti vazhinji vekare vepamusoro-soro Vakuru veUNWTO vanotora danho uye vakanyora tsamba yakazaruka yakanyorerwa nhengo dzenhengo dzinoratidza zvakajeka kuti pane chimwe chinhu chakakanganisika muUNWTO.
Kunyengetedza, kushungurudzwa kwevashandi, chokwadi chekuti kushoropodza hakubvumidzwe muUNWTO chakangobuda pachena mushure mekuzivisa kweEthics Commission.
Chirevo ichi hachina kuzivikanwa kune Executive Council pakuvhotera Zurab:
Iyi ndima mumushumo wetsika inoipfupisa:
Neanopfuura makore 35 ebasa pasi pevanyori vakuru vatanhatu veSangano, ayo anopfuura makore makumi maviri akatsaurirwa kutsika uye mutoro wemagariro, Ethics Officer wemukati parizvino ndiye mukuru ane basa rakareba kwazvo muUnited States. sangano.
Nechikonzero ichi, ndakakwanisa kuona nekushushikana uye kusuwa kuti maitiro emukati akajeka aivepo muhutongi hwakapfuura, pakati pezvimwe zvinhu, maererano nekukwidziridzwa, kudzokororwa kwezvinzvimbo uye kugadzwa, zvakangoerekana zvavhiringwa, zvichisiya nzvimbo yakakwana opacity uye yekutonga zvisina tsarukano.
Chokwadi chekuti nhengo zhinji dzeDare Repamusorosoro rimwechete zvino vatsigira tsamba yakaitwa nevaimbove Mabharani-General pachena uye kuseri kwechiitiko chinofanira kupa chikonzero chakakwana kuti nyika yega yega iremekedze zvakawanikwa neEthics Commission kuti:
... uye bvumidza kutarisa kwechipiri uye kuona shanduko huru yakaitika pakati penguva yakasimbiswa Zurab ne Executive Council muna Ndira, uye mamiriro ari kutarisana neUNWTO nhasi.
Sezvakataurwa naFrancesco Frangialli tariro yake ndeyekuti, General Assembly, mukukwanisa kwayo kwe "supreme organisation" yeUNWTO, ichaita zvinodiwa kuti ive nechokwadi chesarudzo dzakachena muMadrid uye kudzokera kuhutungamiri hwakanaka hweSangano.
Tsamba ichangotumirwa munaNovember 24 neMusoro weUNWTO Executive Council yakasangana muna Ndira 2021 inoti:
Mafambisirwo esarudzo pakati pevamiriri akaunzwa neHurumende dzeBahrain neGeorgia, akaitwa panguva yechikamu chegumi nenhanhatu cheExecutive Council, akateedzera mapoinzi ese neMitemo, nemaitiro akaiswa ne Executive Council mugwaro CE/113/112 rev. .6, pamwe chete neMitemo yeMafambiro eDare Repamusoro uye neMitemo YezveSarudzo neKuvhota Kwakavanzika kweUNWTO.
MuSarudzo yakataurwa, yakaitwa nekuvhota pachivande neNhengo dzeDare Repamusorosoro dzakatenderwa zvakafanira kuburikidza nekuratidzwa kwemagwaro echokwadi akapihwa neHurumende dzadzo, yakapindwa ne33 ye34 Nhengo dzeDare Repamusorosoro dziripo pamusangano, dzatonyorwa pamusoro.
Pakupedzisira, panguva yemusangano we113th weExecutive Council, dare rakasarudza kurumbidza Mr. Zurab Pololikashvili seMunyori Mukuru weSangano panguva kubva 1 Ndira 2022 kusvika 31 Zvita 2025, pahwaro hwekurudziro mhedzisiro yechakavanzika. kuvhota pakati paAmai Shaikha Mai bint Mohammed Al Khalifa, Mumiriri weHumambo hweBahrain, akawana mavhoti masere, uye VaZurab Pololikashvili, Mumiriri weHurumende yeGeorgia, vakawana mavhoti makumi maviri nemashanu.
Kune zvese zviri pamusoro uye munzvimbo yangu seMutungamiriri weDare reMutungamiriri, ndinosimbisa kuti panguva yehutungamiriri uhwu zviitiko zvese zvakaitwa zvakagadziridzwa kuMitemo nemutemo uripo, iri sarudzo yakaitwa neDare Repamusoro pamusangano wayo wapfuura maitiro. zvakabatanidzwa nemirairo.
Nekuona zviri pamusoro, uye nekuremekedza zvakabuda muvhoti yakaitwa pachikamu chechigumi nenhatu cheExecutive Council, ndinodzokorora kuti Executive Council yeWorld Tourism Organisation, ichitevedzera zviri muChikamu 113 cheStatutes uye Article 22 ye. Mitemo yeKuronga kweMutungamiriri weDare, inokurudzira kuGeneral Assembly Mr. Zurab Pololikashvili seMunyori Mukuru kwenguva ye29-2022.
Pasina chimwe chinhu, ndinorondedzera kufunga kwangu kwepamusoro uye kuremekedzwa.
Mutungamiri weUNWTO Executive Council,
José Luis Uriarte Campos igweta kubva kuUniversidad de Los Andes uye dhigirii ra master muPublic Policy kubva kuUniversidad del Desarrollo.
Neanoda kusvika makore makumi maviri echiitiko, ane basa rinozivikanwa munyika yeruzhinji, achiratidza basa rake semukuru wevapi vezano muBazi reEconomy, Development, uye Tourism; territorial chief mu Ministry of Public Works uye National Director weSercotec.
Muna 2014 akashanda seMunyori Mukuru weNational Chamber of Commerce, Services and Tourism, achitsanangura nzira itsva dzebasa nerutsigiro rwechikamu.
Nhasi anoshanda sa Undersecretary of Tourism, mubatanidzwa unoenderana neBazi reEconomy, Development, uye Tourism.
Zvinofanira kucherechedzwa, kuti maererano neakavimbika eTN masosi tsamba iyi yakanyorwa naAlicia Gomez, gweta remutemo reUNWTO, uye yakapihwa gurukota muChile kuti isaine.
Nhume dzeUNWTO dzinofanirwa kuita zvine mutsindo uye kuongorora chokwadi chese. Kana isiri iyo nyika yekushanya ichafanirwa kurarama makore mana nemhedzisiro.